၂၀၁၇ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေ ၂ ဆုရ ဆရာတင့်ဇော် (၁၉၄၂-၂၀၁၉) စာအုပ်များ Memoirs
• ပုံနှိပ်မှတ်တမ်းနှင့် အကျဉ်း (ရှိသလောက်သာ)
• အထက်မှအောက်၊ ဝဲမှယာ
1️⃣ အာရပ်ဝတ္ထုတိုများ (မကွယ်လွန်မီနောက်ဆုံးထုတ်စာအုပ်)
• စာနဒီစာအုပ်တိုက်၊ ၂၀၁၉ ဩဂုတ်၊ ၂၅၀၀ ကျပ်။
???? အာရပ်နိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ အီဂျစ်၊ အီရတ်၊ မော်ရိုကို၊ လက်ဘနွန်၊ တူနီးရှား၊ ဆီးရီးယား၊ ပါလက်စတိုင်း၊ ကူဝိတ် နိုင်ငံများမှ ဝတ္ထုတို (၁၈) ကို ဘာသာပြန်စုစည်းထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အာရပ်ဝတ္ထုတွေဟာ ဘာသာပြန်သူရှားပါးတာမို့ ဆရာတင့်ဇော်ရဲ့ ဘာသာပြန်မှုဟာ မြန်မာစာပေ ဘာသာပြန်ကဏ္ဍမှာ နေရာတစ်ခု ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
2️⃣ အရသာမတူသောပန်းသီးများ (၂၀၁၇ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေဆုကို ပင်ကိုယ်ရေးဝတ္ထုတိုမှာ ဆုရခဲ့တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်တယ်။ တစ်နှစ်တည်းမှာပင် စာနဒီမှ ထုတ်ဝေတဲ့ အာရှဝတ္ထုတိုများစာအုပ်နဲ့လည်း အမျိုးသားစာပေဆု-ဘာသာပြန်ကို ရခဲ့တယ်။ ကျနော့်မှာစာအုပ်မရှိလို့ ထည့်သွင်းမဖော်ပြနိုင်)
• လင်းလွန်းခင်စာပေတိုက်၊ ၂၀၁၇ ဩဂုတ်၊ ၃၅၀၀ ကျပ်။
???? ရှုမဝမဂ္ဂဇင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုတို (၃၂) ပုဒ် စုစည်းထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတင့်ဇော်ဟာ ဆိုရှယ်လစ်လစ်ခေတ် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ ဘဝရဲ့ ဒုက္ခတွေကို ခံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှလူများရဲ့အကြောင်းကို ရေးသားထားတာပါ။ ဝန်ထမ်းဘဝ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်များ အဓိကပါဝင်တယ်လို့ ဆရာကပြောပြခဲ့ပါတယ်။
3️⃣ ဆိုင်ဂုံမှ လွတ်မြောက်ခြင်း
• အိပ်မက်အသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၈ ဩဂုတ်၊ ၃၀၀၀ ကျပ်။
???? ဗီယက်နမ် မိဘမဲ့ဘဝမှ အမေရိကန်ကောင်လေးဖြစ်လာသူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းကို Andrea Warren ရေးထားတဲ့ Escape from Saigon ကို ဘာသာပြန်ထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
• ဆုရောင်စဉ်စာအုပ်တိုက်၊ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ၊ ၄၀၀၀ ကျပ်။
???? မြန်မာပြည်နောက်ခံဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉ ရာစုခေတ် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်နဲ့ ဥရောပသူတစ်ယောက်တို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဇာတ်လမ်း။
• လင်းလွန်းခင်စာပေတိုက်၊ ဩဂုတ်လ ၂၀၁၅၊ ၃၅၀၀ ကျပ်။
???? ချီလီနိုင်ငံဖြစ်ရပ်မှန်နောက်ခံ နိုင်ငံရေးဝတ္ထုကောင်းတစ်ပုဒ်ကို ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာအုပ်ပါ။ အာဏာရှင်နဲ့ ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံတွေကြားဖြစ်ရပ်များမှာ ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းဖွဲ့ထားပြီး န်ိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူများ အထူး ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်လည်းဖြစ်တယ်။ ဆရာတင်မောင်မြင့်ရဲ့ အမှာစာနဲ့ ဆရာမောင်ကြည်သစ်ရဲ့ အမှာစာတို့ဟာ အလွန်တန်ဖ်ိုးရှိ။
6️⃣ ပီိနိုချက်အတွက် မြည်းအမြီးရှည်တစ်ချောင်း
• လင်းလွန်းခင်စာပေတိုက်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄၊ ၂၅၀၀ ကျပ်။
???? ဒါလည်း ချီလီနိုင်ငံနောက်ခံနဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်နောက်ခံဝတ္ထုပဲ။ ကျွန်တော်တို့ သိပ်ကြိုက်တဲ့ ဂက်ဘရီရယ်မာကေးရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လည်းဖြစ်တယ်။ အာဏာရှင်နိုင်ငံက နှင်ထုတ်ခံထားရတဲ့ ချီလီလူမျိုးရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ မီဂေးလင်တင်။ သူက အာဏာရှင်နိုင်ငံထဲကို ခိုးဝင်ပြီး ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကား ခိုးရိုက်လာတာ။ အဲ့ဒီအကြောင်းကို မာကေးကို ပြန်ပြောတော့ ဒီဝတ္ထုဖြစ်လာရော။
• လင်းလွန်းခင်စာပေတိုက်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၂၅၀၀ ကျပ်။
???? အယ်လီဝီဆယ်ရဲ့ နာမည်ကြီး Trilogy သုံးတွဲမှာ အလယ်ကတစ်အုပ်။ ဆရာတင်မောင်မြင့် ဘာသာပြန်တဲ့ ညနဲ့ နေ့ အလယ်က စာအုပ်။ စာအုပ်အရ ည ရဲ့ အဆက်ဖြစ်ပေမယ့် အနေအထားအရဆို ညက ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီး မိုးသောက်အရုဏ်က ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်။ သေနတ်နဲ့ ပစ်ပြီး သုတ်သင်ခံရတော့မယ့် သုံ့ပန်းကို ပစ်သတ်ဖို့ စေခိုင်းခံရတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်အကြောင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ အတွေးတွေအကြောင်း။
• လင်းလွန်းခင်စာပေတိုက်၊ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၄၅၀၀ ကျပ်။
???? ယူဂိုဆလပ်ဗီးယားနောက်ခံဝတ္ထု၊ ယခု ခရိုအေးရှားနိုင်ငံနေရာမှာရှိတဲ့ ကလေးရွာမှာ မူရင်းစာရေးသူ Arthur Dorros ဟာ သွားရောက်နေထိုင်ပြီး ရေးသားခဲ့တယ်။ စာရေးဆရာက သူ့ဝတ္ထုကို ဒီလိုရေးခဲ့တယ်။
"ဤဝတ္ထုသည် မျှော်လင့်မထားသည့် အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ အံ့အားသင့်ဖွယ်နှင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အကြောင်းအရာများကိုသာ ရေးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းသဘောသဘာဝ နည်းလမ်းမျိုးဖြင့်တော့ ဇာတ်လမ်းများ စတင်ခြင်း မဟုတ်ချေ"
9️⃣ ဆန်းစသော်တာမှ ဝံပုလွေများ
• လင်းလွန်းခင်စာပေတိုက်၊ ဩဂုတ် ၂၀၁၆၊ ၂၅၀၀ ကျပ်။
???? ယူစွတ် အယ်လ် မိုဟီမက်ရဲ့ Wolves from the Crescent Moon ကို ဘာသာပြန်ထားတဲ့ စာအုပ်။ အမှာစာရေးတဲ့ ဆရာတင်ဟန်ကျော်ကတော့ "ကျွန်တော်တ်ုိ့နိုင်ငံမှာ တကယ်ပဲ အသည်းထိတ်စရာ ငရဲပြိတ္တာ ဇာတ်လမ်းရှည်ကြီးတွေ ပီပီပြင်ပြင် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု ဆရာတင့်ဇော် ဘာသာပြန်တဲ့ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ရတော့ အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းရှည်ကြီးတွေကို ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရသလို ကွင်းခနဲ ကွက်ခနဲ ပြန်မြင်လာတယ်" လို့ ရေးထားပါတယ်။
ကျနော့်ဆီမှာ အထက်ပါ ကိုးအုပ်အပြင် ဆရာတင့်ဇော်နဲ့ ဆရာမြတ်ငြိမ်း၊ ဆရာမောင်ပေါ်ထွန်း၊ ဆရာတင်မောင်မြင့် အားလုံးလေးယောက်ပေါင်း ပြန်ထားတဲ့ မတော်လှန်ရေးသမားများ တစ်အုပ်.. ပေါင်းဆယ်အုပ်ပေါ့။ အာ့ကတော့ စုပေါင်းမို့ မထည့်တော့တာပါ။
ခုတော့ ဆရာတင့်ဇော်ဆီက အသစ်တွေ ရဖို့ မရှိတော့ဘူး။ မကွယ်လွန်မီ ရေးပြီး မထုတ်ရသေးတာတွေတော့ ထွက်လာလိမ့်ဦးမယ်ထင်ရဲ့။
ဆရာနဲ့ ဆုံခဲ့ချိန်တွေ၊ ပြောခဲ့တာတွေကို သတိရလျက် ...
၁၃.၉.၂၀၁၉ (၂၂:၃၇) ရန်ကုန်
PS. ဒီစာရင်းမှာ မပါတဲ့ ဆရာတင့်ဇော် အခြားစာအုပ်တွေ ပုံနဲ့ ပုံနှိပ်မှတ်တမ်းလေး မန့်ခဲ့ပေးရင် သိပ်ကျေးဇူးတင်မိမှာပါ။ ပို့စ်တစ်ခုတည်းမှာ စာရင်းလေးတွေ ပိုပြည့်စေချင်လို့ပါ။ :-)